﻿ဇာနည် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Interview with U Awbatha on 2007 Saffron Movements
Posts Tagged ‘ ﻿ဇာနည် ’
ဇာနည် ● မန္တလေး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၇ ညက…. ကျနော်အိပ်မက်ထဲကို “ကတ်ပလင်း” ရောက်လာလာတယ်… သူ့ရဲ့ “မန္တလေး” ကဗျာကို ရွတ်ပြသွားပြီးတဲ့နောက်…. ကျနော်လည်း ဆယ့်ကိုးရာစုဧရာဝတီရဲ့ တောင်ညာစံဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ “မန္တလေး”...